Madaxweyne Farmaajo ma waxaa soo food-saaray cabsi nafsi ah iyo shaki badan? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Madaxweyne Farmaajo ma waxaa soo food-saaray cabsi nafsi ah iyo shaki badan?
Weerarkii lagu qaaday hotel SYL oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa u muuqda inuu shaki iyo cabsi xooggan geliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cadbullaahi Farmaajo.
Weerarkaas, oo ay fuliyeen Shabaab ku labisan dharka ciidamada, ayaa horseeday in madaxweynuhu xitaa aamini waayo xildhibaanada iyo wasiirada dowladda, isaga oo amray inaysan ilaaladooda la iman karin madaxtooyada.
Kadib wuxuu madaxweynaha maalinkii sabtida ka baaqday xuska maalinta ciidamada booliska oo lagu qabtay garoonka Injineer Yariisow, kadib markii uu soo food saaray walaac amni iyo shaki ku saabsan in falal ay ka dhici karaan garoonka.
Madaxweynaya ayaa mar kale shakiyey, isaga oo halkii uu tegi lahaa wasaarada Qorshaynta, uu madaxtooyada qaybta deeganka ah isugu yeeray inta badan Golihii Wasiirada, si uu uga hadlo xaflad lagu daahfurayey qorshaha qaranka, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hoggaamiyaha xisbiga Wadajir.
Madaxweynaha ma waxaa soo food saaray cabsi amni iyo shaki?
Waxaa sidaas qaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo tixraacayey dhammaan tallaabooyinka taxaddar ee madaxweynaha uu qaaday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay.
“Madaxwaynaha waxaa ka muuqda cabsi nafsi ah iyo shaki badan. Waxaase fajaciso kale ah in goobtaas [Villa Somalia] laga leeyahay doorasho qof iyo cod ah ayaan dalka ka qabanaynaa.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan.
Waxa uu intaas ku daray “Ruux cabsi iyo baqdin intaa la egi hayso, kuwa agjoogana ay u sacaba tumayaan, runtana aysan kula dhiirran karin, ma kula tahay in ay sidan hogaan ugu sii ahaan karaan dal la doonayo in cadaw argagexiso laga xoreeyo, dadkiisana colaad sokeeye laga saaro?”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale cabsida tirada badan ee madaxweynaha ku qeexay mid aan tusaale wanaagsan u ahayn ciidanka.
“Madaxwaynuhu waa taliyaha ciidanka qalabka sida. Waa in awoodiisa hogaan uu inta kale tusaale ugu noqdo dhinaca dhiirranaanta, naf hurka geesinimada iyo tawaaduca.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan.
Ilo-wareedyo ku dhow Villa Somalia ayaa Caasimada Online u sheegay in weerarkii hotel SYL uu aad u gil-gilay madaxweynaha, kuna noqday lama filaan in Shabaab sidaas ugu soo dhowaato Villa Somalia, taasi oo loo sababeyn karo cabsida xooggan ee maalmahan ka muuqatay.
Previous articleCiidamo Itoobiyaan ah oo soo galay deegaano ku yaal Xadka Soomaaliya
Next articleSomaliland oo shuruud ku xirtay wada hadalada Soomaaliya
XOG: Goormee codka kalsoonida loo qaadayaa Ra’iisul wasaaraha cusub?
is-afgaradka wadashaqaynta W/Caddaaladda KGS iyo Barnaamijka Balaarinta Adeega Marin U Helida...
xogdoonnews - September 20, 2020